Madaxtooyada Soomaaliya oo war kasoo saartay weerarkii Lamu | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxtooyada Soomaaliya oo war kasoo saartay weerarkii Lamu
Madaxtooyada Soomaaliya oo war kasoo saartay weerarkii Lamu
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal ay caawa soo saartay ku sheegtay inay caalamka kula biireyso cambaareynta weerarkii koooda Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya.
“Dowladda Soomaaliya waxaay taageero buuxda u xaqiijineysaa dadaallada socoda ee gobolka looga ciribtirayo argagixisada, waxayna sii wadi doontaa inay saaxiibada gobolka iyo caalamka kala shaqeyso in nabad iyo baraare laga helo gobolka iyo dunidaba.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Kooxda Al Shabaab ayaa bayaan ay soo saartay caawa ku sheegatay in weerarkaas ay “ku dishay 17 askari oo Mareykan ah iyo 9 Kenyan ah, kuna burburisay 7 diyaaradood iyo in ka badan 5 gaari oo kuwa ciidamada ah.”
Taliska ciidamada Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa sheegay in war-saxaafadeedyo dhowr ah oo Al-Shabaab ay kasoo saartay dhacdadan ay yihiin kuwa lagu buun-buuninayo xaaladda amniga ee saldhigga. “Dhaqankan waa mid caadi u ah ururkan argagixiso.” Ayaa lagu yiri qoraalka.